Colour painting and Color palette makers Momba anay – Picker loko amin’ny sary
Momba anay – Picker loko amin’ny sary
Bridgegalleryny.com dia tranokala nomaninao ho anao izay te hanararaotra ny mpividy loko avy amin’ny sary, ny mpijery loko RGB, ny mpifidy loko krôma, ny mpanome loko loko, ny mpifidy loko krôma, ny mpanamboatra loko adobe, ny mpijery sary mi-html, ary fampiasa maro hafa amin’ity tranokala ity.
Tena ilaina tokoa ny Bridgegalleryny.com ho anao izay miasa toy ny endrika mpanao loko, mpanao hosodoko, mpaka sary loko, mpanentana loko loko, mpanamboatra tranonkala ary mpamorona, haingon-trano fandraisam-bahiny, tranombakoka ary asaina maro hafa izay afaka manararaotra ity tranokala ity.
Ity tranonkala bridgegalleryny.com ity dia afaka manazava amin’ny an-tsipiriany ireo singa loko rehetra ao anaty sary, anisan’izany ny filaharan’ny loko miandalana, loko modely, loko hex, loko RGB, ary anarana feno feno sy feno.
Raha mamorona pejy web na bilaogy ianao na ho toy ny bilaogy matihanina na am-panafody, azoko antoka fa ho tena sarotra be ny miala amin’ny loko hexadecimal na hex. Satria ity loko hex ity dia be mpampiasa ampiasaina hanamboarana doko isan-karazany amin’ny tranokala.
Inona no dikan’ny Hex Color?
Ny loko Hex raha ny tena izy dia tsy loko iray fa iray amin’ireo fomba fanoratana loko kaody amin’ireo karazana marika loko hafa, toa an’i RGB, HTML, na zavatra hafa. Noho izany dia antsoina hoe ny kaody loko Hexa, na nohafohezina ho Hexa Code na Hexa Coor na Hex Color.
Ny fanoratana dia mampiasa isa avy amin’ny isa 0 ka hatramin’ny 9 ary ny taratasy (avy amin’ny A ka hatramin’ny F), ny isa ny kaody miisa dia misy isa 6, mety misy isa na taratasy fotsiny, na fitambaran’ireo isa sy litera. Avy eo amin’ny maha marika azy eo anoloany mampiasa fefy eo am-piandohana.
# 000000 (isa fotsiny)
#FFFFFF (litera ihany)
# FF0000 (isa sy litera atambatra)
Ankoatr’izay, raha ao anatin’ny tontolon’ny famoronana sary sy ny fanaovana pirinty ianao, dia tsy maintsy ho fantatrao ny loko loko RGB, izay natao ho an’ny fisehoana nomerika na fampisehoana nomerika.
Inona no dikan’ny loko RGB ???
Ny RGB dia miantso ny hoe “Red-Green-Blue” dia jiro modely miloko (modely loko fanampiny) ampiasaina amin’ny fitaovana fampidirana toy ny milina scanner sy fitaovana famoahana fitaovana toy ny fampisehoana fanaraha-maso, ny loko voalohany (mena, Blue, Green) miankina amin’ny teknolojia. ny fitaovana ampiasaina toy ny CCD na PMT eo amin’ny scanner na fakantsary nomerika, CRT na LCD amin’ny efijery fanaraha-maso.
Rehefa (Red-Blue-Green) ny loko telo dia mitambatra mba hamoronana fotsy, ary izany no antony anaovana an’i RGB hoe Additive loko na loko amin’ny fiteny hafa. Ny loko RGB dia ny fitsipiky ny loko ampiasain’ny haino aman-jery elektronika toa ny fahitalavitra, ny mpanara-maso amin’ny solosaina ary ny scanner. Noho izany, ny loko nasehon’ny RGB dia marevaka sy mahafinaritra foana, satria izy ireo dia nalamina toy izany mba hanaraha-maso ireo fampisehoana, fa tsy ny fanaovana pirinty mba hahafahan’izy ireo malalaka kokoa milalao amin’ny lokony. Saingy tsy midika izany fa tsy olana ny RGB satria ny fampisehoana loko RGB dia hamatotra hatrany amin’ny fahaiza-manao / ny fahaizan’ny sary an-tsary izay mitondra azy. Ka raha ny solosaina ampiasainay dia manana karatra grika sy fanaraha-maso tsara, ny fisehoana loko RGB dia ho tsara kokoa noho ny fanaraha-maso fantsona misy karatra grika mahazatra.
Ireto manaraka ireto dia hanazava ireo fomba tsy maintsy ampiasinao hampiasa ny mpanangona loko amin’ny sary toy izao manaraka izao:
1. Tsindrio Fidio ny hoe “Safidio ny sarinao” ary safidio ny sary tianao ho fantatrao ny kaody loko ary alefaso.
2. Soraty ao anaty tsanganana banga ny anaran’ilay sary, aorian’ny “Ampidiro anarana anarana”
3. Tsindrio ny “Alefaso”
Aorian’izany ny filaharana loko lehibe, ohatra ny loko, ny hex, ny loko RGB, ary ny loko miloko feno sy feno ao anaty latabatra iray.
Ahoana?? Mora izany, sa tsia ??
Azafady manandrana mampakatra sary tahaka ny efa anananao. Ary jereo ny valin’ny fitambaran’ny loko natokana amin’ny latabatra. Ny sary izay nakanao dia hampiseho ny loko ambony rehetra, ny hex, ny loko RGB, ary koa ny anarana loko.
This "Momba anay – Picker loko amin’ny sary" graphic has 20 dominated colors, which include . It makes so beautiful color combination inspired from this image.